HILIBKA UGU WANAAGSAN IYO UKUMAHA UKUNTA EE DIGAAGGA - BEERAHA DIGAAGA
Beeraley kasta, oo leh hoygiisa, wuxuu ku dari karaa xayawaannada dabiiciga ah dhowr digaag daaqsinka gudaha ah.
Waxaa jira noocyo badan oo shimbiraha ah iyo tilmaamo kala duwan. Waqtigan xaadirka ah ee horumarinta warshadaha digaaga waxaa jira in ka badan boqol jinsi digaagga.
Iyadoo ku xiran jihada beerta, waxay u qaybsan yihiin noocyada.
Kuwaas waxaa ka mid ah digaagga hilibka, digaagga ukunta, hilibka - shimbiraha ukunta, iyo sidoo kale digaaga bandhigyada iyo dagaal digaagga.
Kuwaasi, kuwa ugu badan ee guriga ku jira waa hilib - noocyada ukunta ee shimbiraha.
Kuwani waa shimbiro la helay iyaga oo gudbinaya laba nooc oo hilib iyo ukun. Noocan shimbir ayaa maanta lagaga doodi doonaa maqaalkan.
Waxyaabaha kala duwan ee guryaha xayawaanka ee ceymiska, meesha ugu muhiimsan ee digaagga. Waxay koray si ay mar walba u cunaan hilibka cuntada iyo ukunta miiska. Baalashooda waxay ku habboon yihiin barkimo.
Hilibka - shimbiraha shimbiraha ee shimbiraha waa mid degan oo shimbiraha nabada jecel. Waxay ka duwan yihiin noocyada kale ee digaagga sidaas darteed Cadaadis cudur oo wanaagsan.
Tani waa mid aan qabin xaaladaha nololeed, oo iyaga uma baahna inay dhisaan dayrarka sare. Marka la barbardhigo jiilaalka ukunta, tan digaaggu wuxuu leeyahay tiro ballaaran. Iyo digaagu waa hooyooyin aad u daryeela.
Wixii beeritaanka hilibka - ukunta wuxuu abuuraa dhinac muhiim ah nafaqada wanaagsan, taas oo ah mid kala duwan iyo tayada. Faa'iidooyinka nafaqooyinka kala duwan ee quudinta, walxaha raadraaca iyo fitamiinada ayaa siinaya digaag fara badan, oo si fiican loo dhigo, iyo tan ugu muhiimsan, waxsoosaarka sare.
Laakiin digaagga ee caanaha this waxay leeyihiin cillad aad u weyn, oo leh quudinta saboolka ah, waxay joojiyaan dhigaya ukunta.
Soosaarka ukumaha ee taranka this ee shimbiraha celcelis ahaan waa qiyaastii 200 goo sanadkii. Iyo hilibka ee this ee dhadhanka waa ka fiican yahay in midabka taranka, tan iyo markii ay leeyihiin musqulo dheeraad ah horumariyo.
Oo hadda waxaan tixgelin doonaa dhowr nooc oo gaar ah.
Breed Island Island
Digaagga noocan ahi aad ayuu u badan yahay. Noocyadaas waxaa la helay iyada oo la mariyo digaagga degaanka ee Maraykanka horaantii sanadka 1850. Sannadkii 1904, noocyada noocan ah waxaa loo keenay heerkii ugu fiicnaa. Iyo 1926-dii waxaa loo keenay waddankeenna.
Shimbiraha way badan yihiin daryeel adag oo aan qabyo ahayn ee a. Toogashadu waa cad, cufan iyo qaro weyn.
Midabkoodu waa casaan-bunni ah, laakiin sannadihii ugu dambeeyay baalasha ayaa soo jiidan yar oo cirro leh. Midabka Rod waa buni.
Bucdi caddaan ah ee caan tani waa dhif iyo naadir. Jidhku waa qaab qaab ah, oo leh haysashada xabadka weyn iyo ballaaran. Madaxa waa wareegsan, yar yar. Qalab ku dheji qaab caleen ah.
Mararka qaarkood shimbiraha qaarkood waxay leeyihiin shanlo midab casaan ah. Tani waxay ka kooban tahay shan ilkood. Qoorta jinsiga Rhode Island waa mid awood leh, oo aan dheereynin fara badan oo hagaagsan.
Sharcigu wuxuu leeyahay midab huruud ah, gaaban oo yar yar. Lugaha shimbirku waa mid gaaban, oo aan baalin. Baalalku ma aha kuwo aad u weyn.
Daboolka waa mid aad u cagaaran, midhaysan, midab yar, midab mug leh oo leh xajmiga cagaarka cagaaran. Qolalka iyo indhaha waa casaan. Xayawaanku waa hooseeyaa, huruud ah oo aan lahayn boomaato, mararka qaarkood waxaa jira maro casaan ah dhinacyada.
Asal ahaan, miisaanka ragga wuxuu u dhexeeyaa 3200-4000 garaam, miisaanka digaaggu waa laga bilaabo 2450 ilaa 2850 garaam.
Waayo, duufaanku waxay ku haboon yihiin siddeedda cabbirka labaad, iyo digaagga saddexaad.
Celcelis ahaan wax soo saarka ukunta Tani waa nooc ilaa 170 jeer sanadkiiiyo mararka qaarkood gaaro ilaa 215 ukumood sanadkiiba. Miisaanka, taas oo ku saabsan 60 garaam.
Midabka qolofku waa midab khafiif ah. Khabiirada ku takhasusay buugan xusuusnow xaqiiqda ah in ukumadu ay tayo badan leedahay.
Nabadgelyada ilbeedku waa 85 boqolkiiba marxaladda qaangaarka, iyo 95 boqolkiiba marxaladda qaangaarka.
Si aan sax ahayn faa'iido daro Noocyada waxaa ka mid ah arrimahan soo socda:
Qaabka qaabka saddexagal ah.
Jirka oo leh miisaan culus.
Gacmaha oo liita
Qoorta dheer iyo madaxa.
Midab khafiif ah oo mataan ah oo baadad ah.
Ku sifooyinka Noocaankan waxaa ka mid ah tusayaasha soo socda:
Tani waa shimbiraha waa ilaha taranka noocyada kale.
Marka ay gaaraan da'da toddoba bilood, waxay bilaabaan ukumaheeda.
Tayo wanaagsan waxaa ka mid ah hufnaan sareysa ee shimbiraha noocyadaas ah.
Roobka sanadka oo dhan.
Shimbiraha way cuni karaan.
Magaca noocyada noocan ahi waa mid ka mid ah dawladaha Mareykanka.
Dabeecad kale oo noocan ah waa in la sameeyo kala soocidda xoolaha, dhacdadan ayaa lagu qabtaa xilliga dayrta.
Digaagga taas oo lagu gartaa wax soo saarka ukumaha sare leh ayaa laga tagayaa si loo abuuro. Digaagga digaaga si loo ilaaliyo wax soo saarka ukunta, waxaa lagama maarmaan ah in lagu hayo heerkulka gudaha 10 darajo. Iyo xilliga qaboobaha, waxay kordhiyaan waqtiga iftiinka guriga hoyga.
Kurbajooga shimbiraha ee New Hampshire
Bird New Hampshire, sida noocyada ugu dambeeyey, ayaa waxaa lagu soo koobay saynisyahannada Mareykanka ee gobolka New Hampshire.
Waxay ku dhacday soddonkii qarnigii labaatanaad, oo ku salaysan jinsiga Rhode Island. Muuqaal aad u kala duwan oo ka mid ah New Hampshire xayawaankani waa wax badan soosaarka ukunta sare iyo miro weyn. Wadamadeena, noocyada noocan ah waxaa la soo saaray 1946.
Shimbiruhu waxay bilaabaan inay jinsi noqdaan bisha lixaad. Midabka qolofta ukunta waa bunni. Badbaadada chick waa 86 boqolkiiba.
Digaagga ayaa ah mid hooseeya oo hoos u jajaban oo xoogaa madow ah. Kala saarista ilmagaleenkaan maaha sida horumarsan sida jinsiyada Rhode Island.
Marka muuqaalka, shimbiraha noocyada kala duwana waxay ka duulaan Rhode Island iyaga oo xajistoodu u egtahay mid leh midab khafiif ah.
New Hampshire waa shimad aad u degan, taas oo suurtogal ka dhigaysa in la ilaaliyo qafiska.
Noocaankan wuxuu u qaybsan yahay laba nooc: nooca broiler (noocyo kala duwan oo shimbiro leh jihada hilibka) iyo ukunta (noocyo kala duwan oo loogu talagalay wax soo saarka ukunta). Shimbiraha noocyadooda kala duwan waxay soo saaraan wax ka badan 200 oo ukumood sanadkiiba, miisaankoodu yahay ilaa 65 garaam. Shimbiraha yar yar, wax soo saarka ukunta wuxuu bilaabmayaa da'da 200 maalmood.
Miisaanka haweenku way kala duwan tahay 2450 garaam ilaa 2950 garaam. Miisaanka lakabka ayaa ka weyn oo qiyaastii 4000 garaam.
Badbaadada shimbiraha yar yar waa 77 boqolkiiba.
Ku sifooyinka Nooca shimbiraha ah waxaa ka mid ah:
Marka ay gaaraan lix bilood bilaw inay kacaan.
Noocadani waxay leedahay nolol fiican.
Waxay u egtahay wax soo saarka ukunta sare.
Dhimashada shimbirta ee New Hampshire waa iyada Hooska hooseeya.
Kurbajooga shimbiraha Plymouth
Shimbiraha buuggan ayaa koray oo keliya maaha hilibka, laakiin sidoo kale bandhigyada. Shimbirahaasi waxay leeyihiin tayada sida quruxda aan qabyo ahayn, soosaarka ukumaha sare iyo tayada hilibka.
Sida jajabyada kor ku xusan, noocaan oo kale ayaa sidoo kale lagu soo qaatay Maraykanka ee Maraykanka qarnigii 19aad. Waqtigan xaadirka ah waqtigaan ayaa waxay noqdeen kuwo aad u caan ah aduunka oo idil.
Tan iyo hilibkani waa jinsi ah, sidaa darteed shimbiraha waxay leeyihiin jir aad u weyn. Miisaanka loo yaqaan 'hen' waa qiyaastii 3500 garaam, iyo dabocase ilaa 5000 garaam. Midabka shimbiraha waa mid aad u kala duwan: caddaan, caleen, lafdhabarta ama xargaha.
Wixii soo-saarka hilibka, shimbiraha cad-cad ayaa koray, iyo ujeeddooyinka caansanaa inta badan waxaa loo isticmaalaa digaag.
Shimbiraha ayaa soo socda sifooyinka:
Xuubka shimbirku waa mid gaaban oo jaalle ah.
Kala duwanaanta noocyada kale ee indhaha badan leh.
Daboolku waa ballaaran yahay oo leh tiro badan oo baadad ah.
On cayayaanka ah ee cirro, caadi ahaan afar qabasho.
Shimbiraha caanahan ayaa aad u deggan. Waxay leeyihiin awood u leh xoojin dheerad ah. Maxaa ka kala soocaya noocyada kale.
Qiyaasta celceliska wax soo saarka ukunta ee Plymouth waa qiyaastii 170 jeer sannadkii. Midabka qolofku waa mid caadi ah.
Midabka digaagga wuxuu ku xiran yahay midabka waalidkiis.
Maqnaanshaha ilmagaleenkaan wuxuu dhacaa waqti hore oo ah lix bilood.
Sifooyinka wanaagsan Noocyada Plymouthrock:
Hayso waqti dheer.
Koritaanka degdegga ah ee shimbiraha noocyadaas.
Caleemaha waa la koray oo keliya maadaama uu qaato hilibka dhadhanka leh, laakiin sidoo kale ujeedooyinka muujinta.
Plymutrok waxay leedahay qumman sare iyo hilib tayo sare leh.
Moscow oo ah digaagga
Si ay u koraan digaagga Moscow, waxaad u baahan tahay inaad si fiican u kormeerto nafaqada. Tan iyo miisaanka weyn iyo cunista qadar weyn oo ah cunto, digaaggu waa u nugul yahay cayilka.
Ugu fiican wuxuu noqon doonaa afar cunto oo isku dheelitiran maalintii. Labadii jeer ee ugu horeeyay waa cuntada qoyan, oo la diyaariyey oo kaliya cashada, iyo labada kale waa hadhuudh. Laakiin waxaa muhiim ah in hadhaaga cuntada qoyan laga saaro, haddii kale waxaa laga yaabaa inay noqoto dhanaan.
Noocyada shimbirta madow ayaa si fiican u taagan. Waxaa soo saaray beeraleyda digaaga ee warshadaha Bratsevskaya oo ay la socdaan saynisyahanno ka socda Akadamiyadda Beeraha Cuntada ee Moscow. Aragtida ayaa la ansixiyay sannadkii 1980-meeyadii.
Si loo helo buuggan waxaa la sameeyey dhowr marxaladood. Ujeedada ugu horeysay waa in la helo nooc ka mid ah digaagga, si ay u helaan content hilib sare, iyo sidoo kale in ay leeyihiin heerka wax soo saarka ukumaha sare. Hadafka marxaladda labaad waa in la wanaajiyo taranka.
Qaababka noocan ah:
Maskaxda Moscow waxay leedahay madax weyn. Tooggu waa caadi ahaan qaabka xaashida, qumman. Gogol ee shimbir waa madow, oo aan dheereyn, wax yar wax yar.
Midabka indhaha waa orange.
Qoorta shimbirtu maaha mid aad u dheer. Xabadku waa yar yahay dusha iyo ballaaran. Lugaha ma ahan mid dheer, baaluq. Baalalka iyo daboolka ayaa si aad ah loo horumariyay.
Taabashadu waa mid aad u cufan, madow.
Dumarka madaxa ee mararka qaarkood waxaa jira dhibco dahab ah. Ragga ka mid ah noocyada noocan ahi waa kuwo aad u qurux badan. Waxay leeyihiin xirmo dahab ah madaxa iyo dhabarka.
Ku sifooyinka wanaagsan Caleemaha Moscow waxaa ka mid ah:
Aragtidu waa mid u adkaysata xaaladaha kala duwan ee xabsiga.
Aragtidu maaha mid aan caadi ahayn nafaqada.
Shimbirtu waxay leedahay awood sare.
Sidoo kale, taranka ayaa u adkaysta cudurada digaaga kala duwan.
Faa'iidada shakiga ah waa suurtagalnimada wax soo saarka gacanta.
Digaagga ayaa billaabanaya bilawga lixaad.
Khasaare ka soo gaaray jinsiga Moscow waa dareenka ukunta oo daciif ah.
Midabka digaagga ee noocaan ah waa madow. Noockan shimbirta ah waxaa loo isticmaalaa Beelaha beeraha gaarka loo leeyahay iyo kuwa aan khaaska ahayn.
Tan iyo noocyada noocan ah ee hilibka - ukunta, tayada hilibka iyo wax soo saarka ukunta waa dabeecad muhiim ah oo ka mid ah noocaan. Celcelis ahaan, hal shimbir ayaa qiyaastii 230 ukumo ah sanadkiiba. Laakiin haddii aad siiso daryeel aad u wanaagsan oo loogu talagalay taranka, mararka qaarkood waxay soo baxdaa ilaa 2875 ukun sanadkiiba. Miisaanka hal ukun waa 60 garaam. Midabka ukunta waa bunni fudud.
Cabbirka hal digaag waa 2500 garaamiyo miisaanka lakabka waa qiyaastii 3000 garaam.
Shimbirku wuxuu jecel yahay kulaylka, sidaas darteed waa in la jilciyaa coop digaag wanaagsan. Xilliga jiilaalka, waa lagama maarmaan in dhulka lagu diiriyo caws, iyo xagaaga waxaa lagama maarmaan ah in lagu rusheeyo ciid iyo caleemo. Kadib wakhti cayiman, qashin-sidahan ayaa isku dari doona digada digaagaha, waxaadna heli doontaa meel aad u fiican oo kuleyl ah.
Noocani waa mid caalami ah. Tan iyo miiska iyo waxaad heli kartaa hilibka cusub iyo ukunta. Kala duwanaantan waxaa lagu koray oo kaliya beeraha waaweyn, laakiin sidoo kale cariishyada xagaaga.
Digaagga Moscow waa mid xasilan oo aan gardarro lahayn, uma baahna daryeel taxadar leh. Sidaa darteed, muhiim ma aha in la dhiso deyr weyn.
Heerka noolaanshaha ee digaagga dhalinyarada waa qiyaastii boqolkiiba 90.
Cunto-sannadeedka Kuchinski ee shimbiraha
Kuchinsky Kura waa noocyo aad u wanaagsan, tan iyo markiiba ka dib muuqaalka ayaa noqday mid caan ah.
Taariikhda noocyada noocan ahi waa mid aad u fudud. Noocaankan waxaa lagu soo shubay warshad digaag ah oo ku dhow Moscow. Waqtiga qiyaasta dhacdadu waa muddada laga soo bilaabo 1948 illaa 1990. Caleemaha waxaa loo magacaabay ka dib markii la gooyey.
Si aad u hesho buuggan, noocyada soo socda ayaa loo isticmaalay: Australorp, dhuuban Plymouth, luuqada madow, jinsiga - jasiiradda. Dhamaadkii, waxay u muuqatay mid aad u qurux badan oo ku habboon Jubilee Kuubinsky.
Noocyada kale, ayaa loo isticmaalaa in la helo hilibka iyo ukunta. Oo iyadu way ku wanaagsan tahay.
Soosaarka ukunta ee shimbir shimbir waa qiyaastii 200 ukumood sanadkiiba.
Muuqaalka ugu muhiimsan ee shimbirta waa u nuglaanta wanaagsan ee xaaladaha cimilada kala duwan. Kaliya ma qabato xaaladaha qabowga, laakiin sidoo kale cimilada kulul, sidoo kale.
Ukumaha ay qaadeen Kuchinsky Anniversary Digaagu waa weyn, miisaanka hal ukun waa 60 garaam. Muuqaal farabadan oo ukun ah ayaa leh bunal leh oo leh xajmiga casaan.
Waxtarka hilibka ee mid ka mid ah digaaggu wuxuu u dhexeeyaa 2500 garaam ilaa 3000 garaam.
Shimbirta lafteedu waxay u egtahay mid aad u qurux badan, sababtuna waa xajisteeda. Midabada shimbiraha waa dahab ah oo leh qadar xoog leh. Laakiin ragga midabkani waxa uu leeyahay midab casaan, mararka qaarkoodna ay ku badan yihiin bacaha dahabka ah iyo baal madow.
Tayo kale oo tifaftiran oo tani waa Heerka badbaadada aadka u wanaagsan ee loogu talagalay chicks yar yar. Dhammaan digaagga oo muuqday, ku dhowaad 98 boqolkiiba way noolaanayaan. Tani waa mid aad u wanaagsan, gaar ahaan marka la barbardhigo noocyada kale ee shimbiraha.
Kuchinsky Anniversary Digaag si dhakhso ah u hesho miisaan, iyo hilibka digaaga ayaa leh sifooyin tayo sare leh.
Kuchinsky Anniversary Digaag digaag aan qabyo ahayn. Waa sahlan tahay beeralayda inay hayso shimbirahan.
Iyadoo dabeecad fiican leh, shimbiruhu waxay noqdaan kuwo ciriiri ah. Laakiin marka noocyada kale ee muuqda ay ka muuqdaan dhulkooda, waxay isla markiiba bilaabaan inay difaacaan.
Qaababka Tani waa:
Toogga ee digaagga waa bunni, laakiin qoobciyaasha waxay ku casaanayaan madow iyo dahab.
Midabka ukunta waa brownish-casaan.
Madaxa waa mid yar, oo caleen ah.
Xayawaanka shimbiruhu waa muddo dheer.
Lugaha yar yar, oo aan lahayn boomaato.
Dhibaatooyinka ka jira jilaalka kuubnaanta ee kuchwanki aan la aqoonsan.
Ku sifooyinka wanaagsan waxaa ka mid ah:
Qarsoonaan la'aanta inaad naftaada u daryeesho.
Caanaha waa mid deggan.
Awoodda shimbirku waa mid aad u sareysa.
Caanaha ayaa loo habeeyay xaaladaha cimilada kala duwan, qabow iyo kulul.